Sweden oo dib u bilowday Talaalka AstraZeneca iyo Denmark oo go'an Cusub kasoo saartay Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka SwedenSweden oo dib u bilowday Talaalka AstraZeneca iyo Denmark oo go’an Cusub kasoo saartay
Sweden oo dib u bilowday Talaalka AstraZeneca iyo Denmark oo go’an Cusub kasoo saartay
March 26, 2021 Wararka Sweden, Wararka Denmark, Wararka Maanta Somaliska 0
Hay’adda Caafimaadka Dadweynaha ayaa waqti yar ka hor ku dhawaaqday in Sweden ay dib u bilaabayso tallaalka AstraZeneca ee ka dhanka ah Corona, laakiin kaliya loogu tala galay dadka ka weyn da’da 65 taasi badalkeeda Denmark ayaa dhoor todobaad ku kordhisay hakinta ay ku sameysay talaalka.
Iswiidhan ayaa joojisay tallaalka ka dib markii ay soo baxeen warar sheegaya in qaar ka mid ah dadka la tallaalay uu ku dhacay istaroog ama dhiig xinjirow.
Hay’addu waxay ku tiri warbixin ay soo saartay maanta, “Wax saameyn ah oo aan laga helin dadka la tallaalay ee ka weyn da’da 65 sano. Waxaa la filayaa in waxtarka uu ka badnaan doono halista dadkan. ”
“Waxaan ogaanay in AstraZeneca ay tahay tallaal aad waxtar u leh oo baahi weyn loo qabo in laga ilaaliyo Corona dadka waayeelka ah, ” Lataliyaha Gobolka ee Epidemiology Andush Tegnell ayaa sidaa ku sheegay shir jaraa’id maanta. Gaar ahaan maadaama aan aragno faafitaanka cudurka oo sii kordhaya. ”
Tallaalka weli waa laga joojinayaa dadka da’doodu ka yar tahay 65 sano. Tegnell wuxuu sheegay in joojinta kooxdan ay sii socon doonto ilaa macluumaad dheeri ah laga helo khataraha.
Baadhitaanka isku xidhka suurtagalka ah ee tallaalku ku iman karo istaroogga ama dhiig-xinjirowga ayaa weli ku socda heerka Midowga Yurub. Illaa iyo hadda, waxaa Iswiidhan ka jira 2 kiis oo la xaqiijiyey iyo illaa 30 kiis oo adduunka ah.